အနိုင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် …. ရှုံးနေပါပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အနိုင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် …. ရှုံးနေပါပြီ
အနိုင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် …. ရှုံးနေပါပြီ
Posted by intro on Aug 23, 2010 in News |3comments
နုပျိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး အသစ်ပြောင်းလာတဲ့ အိမ်ခန်းထဲမှာ ပရိဘောဂတွေ နေရာချရင်း ငြင်းခုန်နေကြတယ်။ ကောင်မလေး စွာသမျှ ကောင်လေးက တင်းခံတယ်။ တအောင့်နေတော့ နှစ်ယောက်စလုံး ဘာမှမလုပ်နိုင်၊ မပြောနိုင်ဘဲ ငြင်းခုန်တာနဲ့တင် လက်ပန်းကျကုန်ကြတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ အနှိမ်ခံရတဲ့ ကောင်လေးက စကားစတယ်။
“မိန်းမရယ်…. နင်ပြောသမျှ မှန်တယ်ထားဦး ငါ့ကိုအနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲ လှပတဲ့ဒီညကို နင်အကျည်းတန်စေတော့မလား?”
“ငါ့ကိုအနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲ လှပတဲ့ဒီညကို နင်အကျည်းတန်စေတော့မလား?” ကောင်လေးပြောတဲ့စကားက တိုတိုလေးပါ။ ဒါပေမယ့် “အနိုင်”လိုချင်သူကို တွေးစရာတွေ အများကြီးပေးလိုက်တယ်။
“တချို့အချိန်မှာ မင်းအနိုင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် မင်းရှုံးနေပါပြီ” ဒီစကားကို ကျွန်တော်အရမ်းနှစ်သက်မိတယ်။
တကယ်လည်း တချို့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အနိုင်ရလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် ခံစားမှုအပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ရှုံးသွားတယ်။ ငြင်းခုန်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် ဟန်ပန်အမှုအရာမှာ ကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတယ်။ တစ်ဘက်လူကို အနိုင်နဲ့ပိုင်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ခင်မင်မှုမှာ ကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတယ်။
တစ်ခါတလေ နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတွေက တကယ်တမ်းတော့ ရှုံးနေတာတွေဖြစ်တယ်။ လူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းချိန်မှာ “အကျိုးအကြောင်း” ရှိရမယ်။ မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ လည်ပင်းရိုးတွေထောင်တဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့ “အားပြိုင်” နေဖို့မလိုဘူး။
“ညှာတာ၊ သင့်မြတ်”တဲ့အပြုအမှုက “ကြမ်းတမ်း၊ သန်မာ”တဲ့ အပြုအမှုထက် လူတွေလက်ခံကြတယ်။
ပထမလူက ကိုယ်ပိုင်ဟန် မရှိသူ၊ ဆင်ခြေတုံတရား နည်းပါးသူ၊ စိတ်သဘောထား မပြည့်ဝသူဖြစ်တယ်။
ဒုတိယလူက ကိုယ်ပိုင်ဟန် မရှိသူ၊ ဆင်ခြေတုံတရား နည်းပါးသူ၊ စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝသူဖြစ်တယ်။
တတိယလူက ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိတယ်၊ ဆင်ခြေတုံတရားလည်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် “တဇွတ်ထိုး”လုပ်တတ်သူဖြစ်တယ်။
စတုတ္ထလူက ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိတယ်၊ ဆင်ခြေတုံတရားရှိတယ်၊ ညင်ညင်သာသာ ပြုမှုပြောဆိုတတ်တယ်။
ပထမလူမျိုးက ဘာမှမပိုင်ဆိုင်တဲ့ “သနားစရာ” ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။
ဒုတိယလူမျိုးက ကိုယ်ပိုင်ဟန်မရှိတဲ့ “မဆင်မခြင်” ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။
တတိယလူမျိုးက လူလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ အနုပညာကိုမသိတဲ့ “စက်ရုပ်”ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။
စတုတ္ထလူမျိုးက အိန်လ်ဂျယ်နဲ့တူတဲ့ “ချစ်စရာ” ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။
စတုတ္ထလူမျိုးကသာ လောကကြီးကို တကယ့်အောင်နိုင်သူဖြစ်တယ်။
P.S: Mail ထဲကို ၀င်လာတဲ့အထဲက ကြိုက်လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ မူရင်း စာရေးသူကိုတော့ မသိပါ
အထက်ကပြောသလိုသာ လူလေးမျုိးခွဲမယ်ဆိုရင် လူတစ်ရာကို အချိုး ချကြည့်မယ်ဆိုရင်
ချစ်စရာ2လို့အချိုးချဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုကို လိုက်ပြီး ဒေါသအလျောက် ပြောဆို လုပ်ကိုင်မိလို့ အနိုင်ရသလိုလိုနဲ့ ရှုံးခဲ့ရတာတွေ များခဲ့တယ်ဆိုတာ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး သဘောပေါက်လာမိပါတယ်။
အနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ dignity ပျက်သွားတာကို မသိလိုက်မိဘူး။ နောက်ဆိုရင် စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်စရာတွေ့တိုင်း ဒီစာလေးကို သတိရနေမှာပါ။
ဟုတ်တယ် ဆင်ခြင်ကြရမယ် ။ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တာနဲ့ ပျော်စရာအချိန်တွေကုန်သွားလိမ့်မယ် ။